Ogaden News Agency (ONA) – Iiraan oo Ugu Baaqday Sacuudiga Inay Xaliyaan Xurgufta Siyaasadeed ee U Dhaxaysa
Iiraan oo Ugu Baaqday Sacuudiga Inay Xaliyaan Xurgufta Siyaasadeed ee U Dhaxaysa
Posted by Dayr	/ January 8, 2016
Xukuumada Iran ayaa markii ugu horaysay sheegtay inay diyaar u tahay wadahadal la xadhiidha xal u raadinta xiisada ka dhex aloosantay Boqortooyada Sucuudiga iyo Iran.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Iran Mohammad Zarif ayaa Arbacadii soo saaray warsaxaafadeed uu ku sheegay in dowladiisa ay diyaar u tahay in wadahadal lagu xaliyo xiisada ka taagan gobalka isagoo sheegay in wadamada Islaamka u baahan yihiin inay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah.
Xiisadan ayaa ka dhalatay dilkii ay dowlada Sucuudiga Sabtidii lasoo dhaafay ku fulisay wadaad Shiico ah oo la yiraaho Nimr Al Nimr iyo 46 qof oo kale ooy dowlada Sucuudiga ku eedaysay falal argagaxiso. Nimr ayaa kamid ahaa hogaamiyayaasha shiicada ku nool dalka Sucuudiga, wuxuuna horey u waday kacdoon aan hubaysnayn oo looga soo horjeedo xukunka Boqortooyada Sucuudiga.
Shiicada oo si wayn uga cadhoortay dilka Wadaadkaasi ayaa banaanbaxyo ka dhigay dalal kala duwan, shacab cadhaysan ayaa sidoo kale xoog ku galay safaarada Sucuudiga ku leeyihiin magaalada Tehran ee caasimada Iran, halkaasi oo burbur loo geystay aqalka Safaarada Sucuudiga.
Dowlada Sucuudiga ayaa bilowday olole diblumaasiyadeed oo ka dhan ah dowlada Iran arrintaasi ooy uga jawaabayso xadgudubka lagu sameeyey Safaaradeeda Tehran, waxaana arrintan ku taageeray dhowr wadan oo ah Carab iyo dalalka Islaamka ah ooy ku jirto Soomaaliya oo cambaareeyey falkaasi ka dhacay wadanka Iran.
Khubarada falan-qeeya siyaasada bariga dhexe ayaa qaarkood sheegaya in xiisada Iran iyo Sucuudiga ay dhici karto inay dani ugu jirto labadaasi dal oo hoos u dhac ku yimid dhaqaalahooda kadib markii qiimaha batroolka ee caalamka uu hoos u dhacay, waxayna xiisadan keeni kartaa in qiimaha shidaalka markale sare ugu kaco, taasi oo faa’iido dhaqaale u ah labadaasi wadan ee shidaalka soo saara.